Dr. Tint Swe's Writings: September 2018
ငယ်ငယ်က စာတွေဖတ်တော့ ဗော်လဂါမြစ်ရေ နီတွေတွေလို့ တင်စားခဲ့ကြတာဖတ်ရတယ်။ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ကို အားကျထောက်ခံသူတွေက ယန်စီမြစ်နဲ့ ပင်လယ်ဝါကို တမ်းတကြတယ်။ မြစ်တွေကို အရောင်တွေနဲ့ ဖော်ကျူးခဲ့ကြတာပါ။
စစ်ကိုင်းဘေးက ဧရာဝတီထဲ သွေးစီးတယ်လို့သိလာပြီးမကြာခင် ကျွန်တော်လည်း နိုင်ငံရေးထဲရောက်ပါတယ်။
ချင်းတွင်းမြစ်ရေအရောင်ကို တခါမှ စာမဖွဲ့ဖူးသေးပါ။ ရေအရောင်လို့သာမြင်တယ်။ ချင်းတွင်းကို ကျောခိုင်းထားရစ်ခဲ့ပြီး၊ မဏိပူရမြစ်၊ ဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်၊ ဂင်္ဂါမြစ်၊ ယမုန်နာမြစ်တွေဆီရောက်သွားရတယ်။ မောချွေးတွေ ဇောချွေးတွေ စီးကျခဲ့ပါတယ်။
ကနေ့ မြန်မာပြည်ကမြစ်ကြီးတွေ ကြေးဝါရောင်ဖြစ်သွားပြီလား။ စိမ်းပုပ်နေသလား။ နက်မည်းနေပြီလား။
Yamuna River ရွှေငကြင်းတို့ ပိုက်တွင်းမှာ သူတို့ခုန်
၁။ ယမုန်နာဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲခင်ဗျ။
၂။ ဆရာ နယူးဒေလီက ဆရာ့ရဲ့စေတနာဆေးခန်းကို ယမုန်နာလို့ပေးထားတယ်။ မက်ထရိုစီးရင်း နယူးဒေလီ မကျော်ခင်လေးမှာနဲ့ ယူပီပြည်နယ်ထဲမှာ ယမုန်နာမြစ်ရှိတယ်။ ယမုန်နာမြစ်က ဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာ ပါသလား။ ယာမုန်နာလား၊ ယမုန်နာလား သိပ်ဝေခွဲမရပါ။
၃။ သမီးလေးကို ယမုန်လို့ နာမည်ပေးချင်သူက မေးတယ်။ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ရှိမလဲတဲ့။
ယမုန်လို့ သပ်သပ် မရှိပါ။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မရ။ အသံထွက်လှလို့ အမည်မှည့်ခေါ်တာရှိ။ ယမုန်နာဆိုတာ မြစ်တစင်းအမည် ဖြစ်တယ်။ မြန်မာ့ရှေးသီချင်းကြီးတွေထဲမှာ ယမုန်နာပတ်ပျိုးရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့က ယမုနာ၊ ယမုန်နာလို့လည်း ရေးကြတယ်။ သူ့မွေးဇာတိတိုင်းပြည် အိန္ဒိယမှာ ဟင်ဒီစကားနဲ့ ဂျမူနာလို့ ခေါ်တယ်။ ဂင်္ဂါမြစ်ကြီးရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြစ်လက်တက်ဖြစ်တယ်။ ဟိမဝန္တာမှာရှိတဲ့ ယမူနိုထရီ ရေခဲပြင်စကနေ မြစ်ဖျားခံတယ်။ ၈၅၅ မိုင်ရှည်လျားတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာရေးမှာ ဂင်္ဂါမြစ်ကြီးပြီးရင် ယမုန်နာကိုလည်း ကိုးကွယ်ရာတခုလို တန်ဖိုးထားခံရတယ်။ ဟိန္ဒူဒဏ္ဍာရီထဲမှာတော့ ယမုန်နာကို သူရိယနေမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်၊ သေမင်းနတ်သမီးလို့ တင်စားထားတယ်။ ရှေးအတိတ်ကာလမှာ ယမုန်နာမြစ်ရေဟာ ဟိမဝန္တာကနေစီးဆင်းလာပြီး အင်မတန် ကြည်လင် အေးမြခဲ့တယ်။ ၁၉ဝ၉ ခုအထိလည်း ဂင်္ဂါမြစ်ရေကဝါနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ယမုန်နာမြစ်ရေက ပြာနေခဲ့သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးပညာအရကြည့်ရင်တော့ ကနေ့ယမုန်နာမြစ်ရေဟာ လူတွေကိုသေစေအောင်ထိညစ်ညမ်းလွန်းပါတယ်။ နယူးဒေလီဝန်းကျင်မှာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ၅၈% ကို မြစ်တွေထဲကိုစွန့်နေကြတယ်။ BOD ခေါ် ဇီဝအောက်စီဂျင်လိုအပ်မှု အဆင့်ဟာ 14 to 28 mg/l ရှိပြီး ကွန်ဖေါ်မင်းပါဝင်မှုများလှလို့ အတော်ဆိုးဝါးတယ်။ လူနေအိမ်တွေကနေ စွန့်တဲ့ လူ့အညစ်အကြေးတွေ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကစွန့်တာတွေနဲ့ မြေဆီသြဇာတိုက်စားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းခံသုံးခုကြောင့် မြစ်ရေညစ်ညမ်းရတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် လူသန်းများစွာဟာ ဟိုလီး ခေါ် မြင့်မြတ်သောရေချိုးနည်းအရ မြစ်ရေထဲ ရေစိမ်ချိုးနေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေ တနှစ်က ဒေါ်စုမွေးနေ့မှာ ယမုန်နာမြစ်သွားပြီး ငါးလွှတ်ကြတာ ရေကိုကြည့်ပြီး ငါးတွေကို အားနာနေမိတယ်။ ဒိအရင်ကလည်း ဒေလီမှာ မိုးခေါင်လို့ မြစ်ထဲသွားပြီး မြန်မာပြည်ကဘုန်းတော်ကြီးတွေပင့်ပြီး ငရံ့မင်းပရိတ်ရွတ်ဘို့ရာ သောင်ပြင်မှာ လူ့မစင် င်းတဲ့နေရာ ဖျာတချပ်စာအတော်ရှာခဲ့ရတယ်။ (ကန်တော့ပါ။)
ကမ္ဘာ့အံ့ချီးဘွယ်ရာ အာဂရာမှာရှိတဲ့ တာ့ခ်ျမဟာကို ယမုန်နာမြစ်ကမ်းမှာဆောက်ထားပါတယ်။
ဒေလီမှာနေခဲ့ရစဉ် ၂ဝဝ၂ သြဂုတ်လကနေ၊ ထွက်မလာခင် ၂ဝ၁၄ စက်တင်္ဘာလအထိ၊ (၁၂) နှစ်ကြာ မြန်မာပြည်က လာနေကြတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အခမဲ့ဆေးခန်းလေးဖွင့်တော့ ယမုန်နာဆေးခန်းလို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ယမုန်နာဆေးခန်းလေးဟာ ယမုန်နာပတ်ပျိုးသီချင်းထဲကလို ဆင်းရဲသူတွေ အသက်မွေးရာ၊ မြန်မာ့ရိုးရာသီချင်းကြီးအမည်ကို ရည်ညွှန်းခဲ့တာပါ။ အခုတော့ လွမ်းမောဘွယ်ရာပေါ့။
အို့့ ငကြင်းတွေဆန်၊ ငတန်တွေ သောင်ရေစီးမှာလ့့ ကိုတငါ လှေယာဉ်စီးပါလို့ ပိုက်ကြီး ရေချလာ့့
အို့့ နဒီတွင်းမှာလ နှင်းငွေဆော်၊ ချမ်းလို့တုန် မလုံထွေးတယ်၊ ကိုယ်ရေးငယ်ကြုံပေါ့နော့့်
ဒေါင်ဒင်ငယ်သံသာနှင့် တငါလှေလောင်းဆင်း၊ ရွှေငကြင်းတို့ ပိုက်တွင်းမှာသူတို့ခုန့့်
ယမုန်နာဆေးခန်းမှာ ဆုံခဲ့ကြရတဲ့ ဆရာမတွေ၊ ဆေးမှူးတွေနဲ့ လူနာတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကြစေကုန်။
ရန်ဘက်တချို့က - ရန်ဘက်တစ်ချို့က မဟုတ်။
မုန်းထားသူတချို့၏ - မုန်းထားသူတစ်ချို့၏ မဟုတ်။
(၂၆-၇-၁၉၇၅ နေ့ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ်မှ)
The Roman Empire ရောမအင်ပါယာ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/the-roman-empire.html
Cleopatra ကလီယိုပါထရာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/cleopatra.html
ဇွဲ_ ရေး- မြကလောင်၊ ဆို- ပြည်လှဖေ
World History ကမ္ဘာ့သမိုင်း
မြန်မာ့ရာဇဝင် နဲ့ ကမ္ဘာ့သမိုင်းကို အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ ရှည်လျားများပြားလွန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲကနေ ကျောင်းသားတွေအတွက် ထုတ်နှုတ်သင်ပေးတာဖြစ်လို့ ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်အဆင့်ထက် ပိုမသိခဲ့ပါ။ ဆေးကျောင်းသားဘဝမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော့ ဆိုရှယ်လစ်စာအုပ်တွေမှာ သမိုင်းဦးဘုံမြေခေတ်၊ ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ခေတ်၊ မြေရှင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်လို့ လေးပိုင်း ပိုင်းထားတယ်။
နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တော့ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်တာနဲ့ အစွဲကင်းလောက်တာတွေ ရှာဖတ်ရပါတယ်။ များလည်းများတယ်။ ရှားလည်းရှားတယ်။ လူ့သမိုင်းကို အမျိုးမျိုးပိုင်းခြားပြကြတယ်။ ကျောက်ခေတ်၊ ကြေးခေတ်နဲ့ သံခေတ်။ သမိုင်းမတင်မီနဲ့ သမိုင်းတင်ခေတ်။ ရှေးခေတ် (ဘီစီ ၃၆ဝဝ မှ အေဒီ ၅ဝဝ)၊ အလယ်ခေတ် (အေဒီ ၅ဝဝ မှ ၁၅ဝဝ) နဲ့ ခေတ်သစ် (အေဒီ ၁၅ဝဝ နောက်ပိုင်း)။
လူသားတွေဟာ အစဦးကာလတွေမှာ ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ် အတော်ကျဉ်းခဲ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နယ်ကျယ်လာတယ်။ အစမှာ ဒေသတွင်းကလူတွေနဲ့သာဆက်ဆံကြတယ်။ အေဒီ ၆ဝဝ လောက်ကနေ ၁၄၅ဝ လောက်အထိ။ နောက် နယ်ပိုပြီး ကျယ်လာတယ်။ တကမ္ဘာလုံးခြေဆန့်ဆက်ဆံရေးက ၁၄၅ဝ ကနေ ၁၇၅ဝ အထိခေါ်တယ်။ ၁၇၅ဝ ကနေ ၁၉ဝဝ အထိကို စက်မှုတော်လှန်ရေးနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆက်ဆံရေးကာလလို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်။ ၁၉ဝဝ နောက်ပိုင်းကနေ ကမ္ဘာလုံးဆက်ဆံရေး ပြောင်းလဲလာတယ်။ ဘက်ရွေးပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတွေဖြစ်လာတယ်။
ခေတ်သစ်သမိုင်းကို ထပ်ပြီးပိုင်းခြားနိုင်တယ်။ ၁၄၅၃ မှာ ကွန်စတန်တင်နိုပယ်ခေတ်အဆုံးသတ်သွားတယ်။ အီတလီမှာ ဥာဏ်သစ်အရေးတော်ပုံ ခေါ်တာဖြစ်လာတယ်။ တရုပ်မှာ မင်း မင်းဆက်ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လက်လှမ်းဝေးပြီး သိပ်မသိကြတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်မဟာမိတ်ဆိုတာ ဗဟိုအမေရိကမှာဖြစ်တယ်။ ၁၈ ရာစုအလယ်ကစပြီး ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး၊ အမေရိကန်တော်လှန်ရေး၊ စက်မှုတော်လှန်ရေးတွေဖြစ်တယ်။
စက်ယန္တယားခေတ် (၁၈၈ဝ-၁၉၄၅)၊ ပဌမကမ္ဘာစစ် (၁၉၁၄-၁၉၁၈)၊ စီးပွါးရေးကပ် (၁၉၂၉-၁၉၃၉)၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် (၁၉၃၉-၁၉၄၅)၊ လောင်စာဆီခေတ်က ၁၉ဝဝ ကနေ ယနေ့အထိ။
• ၁၉၄ဝ ကျော်မှာ ဂျက်အင်ဂျင်စတယ်။
• ၁၉၄၅ ကနေ အနုမြူခေတ်စတယ်။
• ၁၉၅ဝ ကျော်ကစပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်။
• ၁၉၅၇ ကနေ အာကာသခေတ်စတယ်။
• ၁၉၇ဝ က်ေကစပြီး အင်ဖေါ်မေးရှင်းခေတ်စတယ်။
• ၁၉၇၈ မာလ်တီမီဒီယာခေတ်စတယ်။
• ၁၉၉၆ ကနေ ဆိုရှယ် (ဆိုရှယ်လစ် မဟုတ်) ခေတ်။
• ၂ဝဝ၁ ကနေ ဒေတာအကြီးစားခေတ်။
• ၁၉၄၅-၁၉၉၁ စစ်အေးကာလ။
• ၁၉၅ဝ-၁၉၅၃ ကိုရီးယားစစ်။
• ၁၉၅၅-၁၉၇၅ ဗီယက်နမ်စစ်။
• ၁၉၉၂-၁၉၉၅ ဘော့စနီးယားစစ်။
• ၂ဝဝ၁-၂ဝ၁၄ အာဖကန်စစ်။
• ၂ဝဝ၃-၂ဝ၁၁ အီရတ်စစ်။
• ၂ဝဝ၁ ကနေ ကနေ့အထိ နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်မှုစစ်။
ရှေးသမိုင်းကို နောက်လူတွေကပိုင်းပြီး အမည်တွေ တယောက်တမျိုးပေးကြတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုပိုင်းပိုင်း သမိုင်းဟာ တဆက်တည်းသာဖြစ်တယ်။ ဟိုအရင်ကဖြစ်ပျက်တာတွေကို ရှေးလို့ခေါ်တယ်။ အခုကို ခေတ်လို့ခေါ်တယ်။ တကယ်တော့ တဆက်တည်းသာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ ရှေးလူကြီးတွေလို့ အခေါ်ခံကြရမှာသေချာတယ်။
ဆရာခင်ဗျာ သွေးတိုးရှိသူ မုန့်ဟင်းခါး (ငါး) နဲ့မတည့်ဟု သိရပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါး(ငါး)ထဲက ဘယ်အစားအစာက သွေးဖိအားကို တိုးစေတာလဲ သိပါရစေခင်ဗျ။
ငါးနဲ့ သွေးတိုးမတည့်လို့ ဘယ်လိုလူတွေကပြေသလဲ မသိ။ သွေးတိုးဆိုတာ အငန်နဲ့ မတည့်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်များသူ သကြားလည်း လျှော့ရတယ်။ ငါးဆိုတာ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်ကောင်းတယ်။ ငါးကို ချက်ရင် ကြော်ရင်သာ ဆား၊ ငန်ပြည်ရည်၊ အချိုမှုံ့တွေ မထည့်သင့်ပါ။
မင်္ဂလာပါ ဆရာ သမီးအမေက အသက် ၆၄ နှစ်ပါ ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါတယ် ခေါင်းကြောတွေ ခဏခဏထိုးပါတယ် ဆရာဝန်ပြတာလဲ မသက်သာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။ ဘာတွေများလိုအပ်ချက်ရှိလို့လဲမသိဘူး အာရုံကြောအားဆေးကတော့ betex တော့သောက်ပ်ါတယ်။
Paternity Determination မိဘ စစ် မစစ် မေးခွန်း
မင်္ဂလာပါဆရာရှင် သွေးသားရင်းဟုတ်မဟုတ် DNA စစ်ရင်ဘာတွေလိုအပ်ပါလဲရှင် ဘယ်မှာစစ်ရင်စိတ်ချရပါသလဲရှင်
Paternity Determination မိဘ စစ်-မစစ် စစ်ဆေးခြင်း hhttps://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/blood-types-and-paternity-determination.html
Blood Types and Paternity Determination မိဘနှင့် သားသမီးများ သွေးအုပ်စုများ ttps://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/paternity-determination.html
- Syphilis ဆစ်ဖလစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis.html
- Syphilis Tests ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ စမ်းသပ်နည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-tests.html
- Syphilis test results ဆစ်ဖလစ် စမ်းသပ်နည်းအဖြေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-test-results_13.html
- Syphilis Treatment (ဆစ်ဖလစ်) အတွက်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/syphilis-treatment.html
- VDRL ကာလသားရောဂါ စစ်ဆေးနည်းများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/vdrl-tpha.html
Nail fungal infection လက်သည်းမှို မေးခွန်း
ဆရာခင်ဗျာ ကျနော့်ရဲ့ ဘယ်ဘက် လက်ညိုး လက်ခလယ် လက်သူကြွယ် သုံးချောင်းရဲ့ လက်သည်းခွံတွေက nail fungus လက်သည်းမှိုရောဂါမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ လက်သည်းတွေ ခြောက်ခြောက်လာပြီး လူအမြင်မှာ ရှက်စရာ ဖြစ်နေလို့ပါ
အပြင်ရောက်တဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်လက်ကို ထုတ်ပြဖို့မရဲလောက်အောင် သိမ်ငယ်ရလို့ပါ
ကျနော်သိချင်တာ လက်သည်းမှိုက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲဆရာ ပြီးတော့ ပျောက်ကင်းအောင် ဘယ်လ်ုမျိုး ကုသရပါသလဲ ဆိုတာပါ အကြံပေးစေချင်တာပါ
Nail fungal infection လက်သည်း-ခြေသည်းမှို https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/nail-fungal-infection.html
B20 + ဆိုးတာ
ဆရာ B20 + ဆိုးတာဘာရောဂါရဲအဓိပ္ပါယ်လဲ့သိချင်းလိုပါ
မသိပါ။ ဂူရယ်လ်မှာရှာတော့ အင်ဂျင်ဆိုတာ တွေ့တယ်။ မေးခွန်းမှာ (း) တွေပိုနေတယ်။ (့ ) လည်းပိုနေတယ်။
Middle ear infection နားပြည်ယိုခြင်း မေးခွန်း
ဆရာ နားပြည်ယိုတာ ဆေးခန်းပြလိုက်ပျောက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက် နားပိတ်သလို နားအူသလိုခံစားရပါတယ် အကြံဥာဏ်ပေးစေလိုချင်ပါတယ် လေးစားစွာဖြင့်
Middle ear infection နားပြည်ယိုခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/07/middle-ear-infection.html
Hyperprolactinaemia နို့ထွက်ဟော်မုန်းများခြင်း မေးခွန်း
သိချင်တာလေး မေးခွင့်ပြုပါ။ ကျွန်မက အသက် ၃၄နှစ် အိမ်ထောင်သက် ၇နှစ် ကလေးက ၉ပတ်နဲ့ ၁၃ပတ်ကြားမှာဘဲ ၃ကြိမ်ပျက်ကျထားပြီပါပြီရှင့်သားအိမ်အသားလုံး အခြေအနေလေးနဲ့ သွေးစစ်ထားတဲ့ အဖြေလေးသိချင်ပါတယ်ရှင် ခလေး ခဏခဏပျက်ကျတာ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ ULG နဲ့ သွေးစစ်ထားတာလေး ကျေးဇူးပြု၍ဖတ်ကြည့်ပေးပါဆရာ။ မေးထားတာမှားတာရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။အရမ်းသိချင်နေလို့ပါ။
Hyperprolactinaemia နို့ထွက်ဟော်မုန်းများခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/hyperprolactinaemia.html
Endometrial hyperplasia သားအိမ်ထူခြင်း မေးခွန်း
ဆရာ ကျွန်မ ဓမ္မတာ မလာတာ ၂လ ရှိပါပြီ ကလေးလဲ ရှိတာမဟုတ်ပါ ultrasound ရိုက်တော့ သားအိမ်ထူနေတယ်လို့ပြောပါတယ် ogက ဆေးပေးလိုက်ပါတယ် ကလေးယူချင်လို့ပါ ဘာဆေးမှ မသုံးတာ ၉လ ရှိပုပြီ ယခင် သမီး ၂ယောက်ရှိပါတယ် ဘာဆေးသောက်ရမလဲ ညွန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်
Endometrial hyperplasia သားအိမ်ထူခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/endometrial-hyperplasia.html
Endometrial thickness သားအိမ်အတွင်းလွှာ အထူအပါး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/endometrial-thickness.html
Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း မေးခွန်း
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျန်တော့်အသက်က ၂၁ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ ကျန်တော့်အသက် ၁၇-၁၈ လောက်ကနေစပြီး dextro ဆိုတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို တကြိမ်ကို ၃၀ နှုန်းနဲ့သောက်ခဲ့ပါတယ် အခုချိန်မှာ ကျန်တော်ရဲ့ ဦးနှောက်က မှတ်ဥာဏ်တွေကော ဝမ်းထဲ အစာချေအင်္ဂါတွေကော ရှိကောရှိပါသေးရဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာ အဖေနဲ့အမေကိုဒုက္ခ ပေးခဲ့တာ များလှပါပြီဆရာ ကျန်တော် ကောင်းမွန်အောင်နေချင်လို့ပါဆရာ အဖေနဲ့အမေကိုလည်း ကျန်တော် အဖြစ်မသိစေချင်လို့ကျန်တော့်မှာ ဘယ်သူ့ကိုထုတ်ပြောပြီး အကူအညီတောင်းခံရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့တာပါ Dextro နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဆရာရဲ့ စာတွေဖတ်လိုက်ရပြီး ကျန်တော်ဆရာဆီအကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ ကျန်တော့်ကို နည်းပေးလမ်းပြပေးပါဆရာ
Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
စိတ်၊ မူးယစ်အထူးကုဆရာဝန်ကနေ အကောင်းဆုံးကူညီနိုင်ပါတယ်။ တခုခုစွဲနေတာကို ဖြတ်ဖို့ရာ ကာယကံရှင်က ဖြတ်လိုစိတ်ရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်တယ်။ ရပါမယ်။ အားပေးတယ်။
ပြည် နှင့် ပြီ
မင်္ဂလာပါဆရာ ပြည်တည်အနာ နဲ့ ပြီတည် ဘယ်စာလုံးက အမှန်လဲ သိပါရစေခင်ဗျာ
ပါပြီလို့ရေးရမှာကို ပါပီလို့ရေးနေကြတယ်။ စပြီးကို စပီးလို့ရေးနေကြတယ်။ မှားတယ်။ ဖြစ်ကိုလည်း ဖစ်တဲ့။ မှားတယ်။
ပို့စ်တခုမှာ သပြေသူလို့ မှားနေတာ တွေ့တယ်။ ဝတ္ထုအမည်ကတော့ တပြည်သူ မရွှေထား။ ရုပ်ရှင်အမည် သီချင်းအမည်တွေလည်း မမှားပါ။ အဲလိုပဲ အရင်ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကို ရေးတင်သူတွေက စာအုပ်အမည်ကို တစ်သတ်ပုံအမှားတွေနဲ့ ရေးကြတယ်။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အထက်တန်းနဲ့ ဆေးကျောင်းသားခေတ်မှာသာမက ကနေ့အထိတိုင် ထင်ရှားပြီး စာဖတ်သူတွေကို အလွန်စွဲလမ်းစေပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ပြန်ထုတ်ကြတယ်။ သတ်ပုံတွေကို ပြင်ထားကြတယ်။ စာအုပ်အဖုံးမှာ တစ်မဟုတ်ဘဲ ကြော်ငြာသူတွေက တစ်လုပ်ထားကြတယ်။ တပြည်သူ မရွှေထားကို တစ်ပြည်သူမရွှေထားလုပ်ထားကြတယ်။
ဟိုတခါတုန်းကကဲ့သို့ပင် ငွေလရောင်မှ ရွက်ကြွေတောများကို ညိုလတ်မြင်သည်။ ဟိုတခါတုန်းကကဲ့သို့ပင် ညိုလတ်သည် ညင်သာစွာ စတင်သီဆိုသည်။
သတ် နှင့် သပ်
၁။ ဆရာရှင့် တဖက်သတ်လား တဖက်သက်လား ဝေခွဲမရတော့လို့အချိန်ရရင်ဖြေပေးပါ တောင်းဆိုပါတယ်ရှင့်
၂။ ဆရာ ဘယ်လိုစမ်းသက်မှုမျိုး လုပ်ရပါလဲဆရာ။
၃။ ကျနော် ညာဘက်လက်နှင့် စာရေးပါတယ်။ အရင်ကစာရေးရင် အတန်အသင့်လှပြီး သက်သက်ရက်ရက် ရှိပါတယ်။ ၃/၄ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ စာရေးရင် ထိမ်းမရဘဲ အောက်ဘက်ကို ဆွဲဆွဲသွာပါတယ်။ အရင်ကရေးသလို သက်သက်ရပ်ရပ်လည်းမရှိ လှလည်းမလှတော့ပါ။
၄။ ဆရာ သတ်တု နဲ့ သတ်ထု အကြောင်းလေး သိချင်ပါတယ်။
သတ္တု = ရွှေ၊ ငွေ၊ သံ၊ ခဲ ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်။
သတ္တု = (တ) = ရွှေ၊ ငွေ၊ သံ၊ ခဲ ကဲ့သို့သော ဒြပ်စင်။
သတ္တုကျ = (တ) = အပြစ်တာဝန် စုပုံရောက်ရှိ။
သတ္တုချ = (တ) = ဝေဖန်ဆန်းစစ်သည်။
သတ်နင်း = (သတ္ထု + မဒ္ဒန) = (ထ) = ရန်ကိုနှိမ်နင်းနိုင်သောမင်း
မနေ့က အင်တာဗျူးဖြေရတယ်။ အိန္ဒိယမှာနေတုန်းကတော့ မကြာခဏဖြေခဲ့ရတာ။ ဒီတိုင်းပြည်ရောက်တော့ မြန်မာဘာသာနဲ့လွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုတွေကနေ ဖုန်းနဲ့ မေးပါသာဖြေရတော့တယ်။ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ဗွီအိုအေက တကူးတကဖိတ်လို့ ဝါရှင်တန်ဒီစီက စတူဒီယိုအထိသွားရပါတယ်။ ကျေးဇူး။
မနေ့က အမေရိကန် ဖရီးလင့်စ်ဂျာနယ်လစ်တယောက်က အိမ်တိုင်ရာရောက်လာပြီး ဗျူးတယ်။ ရခိုင်အရေးမှာ နိုင်ငံတကာကအမြင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကအမြင်တွေ ဘာကြောင့် အဲလောက်ထိ ကွာခြားပါသလဲတဲ့။ နာရီဝက်မကကြာကြာ ကြိုးစားဖြေလိုက်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်က ရီဆာ့ခ်ျလည်းလုပ်လာတဲ့သူ။ ယမုန်နာဆေးခန်းအကြောင်းပါ မေးသေးတာ။ အမေးအဖြေတွေ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်နဲ့ ပန်းပင်သစ်ပင်လေးတွေကိုပါ ရိုက်သွားသေးတယ်။
ကျွန်တော်ဖြေတာတွေက ဖိုက်စတားဟော်တယ် လော်ဘီမှာ မဟုတ်ပါ။ အရှိအတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဆလိုက်မီးရောင်အောက်မှာ မိတ်ကပ်နဲ့ မဟုတ်ပါ။ သဘာဝကျတာတွေသာဖြစ်ပါတယ်။
A မှားရေးတာကို မှန်တယ်ထင်နေကြတယ်
ဒီမှာတော့ စက်တင်္ဘာ ၃ဝ ရက်သာရှိသေးတယ်။
ဧ ဂျွန် စက် နို ၃ဝ ဆို၊ ဖေကို ၂၈၊ ကျန်သောလမှာ ၃၁။
မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီး ပိဿာချိန်။
အေ တခု၊ တကောင်၊ တယောက်။
ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကျက်မှတ်ခဲ့တာတွေ အခုထိ မမေ့သေးပါ။ အေ နဲ့ ပုဂံဘုရားကိုတော့ အတော်များများက မှားရေးတာကို မှန်တယ်ထင်နေကြတယ်။
Drugs Links မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နေ့
ကနေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၅၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်တယ်။ သဝဏ်လွှာထဲမှာ ၂၆-၆-၂ဝ၁၈ နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေး နေ့အခမ်းအနားမှာ သမတကြီးက မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးဟာ တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတရပ်လုံး အမျိုးသားရေးတာဝန်ကြီးတရပ်လို့ ပြောကြားကြောင်း ဖတ်ရတယ်။ သမတမိန့်ခွန်းကို ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာသုံးတာ ဆင်ဆာလုပ်လိုက်တယ်။ တစ် သုံးလုံးကို ပြင်လိုက်တယ်။
• Burundanga ပဒိုင်းပွင့်လိုဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/burundanga.html
• California nuns fight ban on marijuana businesses ဆေးခြောက်နှင့် သီလရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/california-nuns-fight-ban-on-marijuana.html
• Carfentanyl ဆင်ဖြူတော် မူးယစ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/carfentanyl.html
• Cough Syrup Addiction ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cough-syrup-addiction.html
• Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/date-rape-drugs.html
• Drug Abuse ဆေးဝါးတလွဲသုံးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/drug-abuse.html
• Drugs and politics ဆေးတန်ခိုးနဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်နိုင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/drugs-and-politics.html
• Drugs used in the military စစ်သုံးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/amphetamines-2.html
• Fake alcohol အရက်တု http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/fake-alcohol.html
• High မူးယစ်ဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/high.html
• Inhalant abuse လမ်းဘေးဆေးရှူ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inhalant-abuse.html
• Marijuana addiction ဆေးခြောက်က စွဲသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/marijuana-addiction.html
• Marijuana ဆေးခြောက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/marijuana.html
• Military and Crystal Meth စစ်တပ်နဲ့ စိတ်ကြွဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/military-and-crystal-meth.html
• Opium ဘိန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/opium.html
• Predatory Drugs သတိလစ်စေရန်ပြုလုပ်နှိင်သည့် ဆေးဝါးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/predatory-drugs.html
• Rape drugs အဓမ္မကျင့်ဘို့သုံးကြတဲ့ ဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rape-drugs.html
• Rohypnol ရိုဖီနောလ် မုဒိန်းဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/rohypnol.html
• Warning to girls and women အမျိုးသမီး-မိန်းကလေးတွေ သတိပေးပါရစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/warning-to-girls-and-women.html
ဖြစ်တဲ့သူ ကျား-မ မသိ။ အသက် မသိ။ ရောင်လို့ ရေးရတယ်။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။
1. Cholecystectomy Q and A သည်းခြေအိတ် ထုတ်ထားသူ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/cholecystectomy-q-and.html
2. Cholecystitis သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/cholecystitis.html
3. Gallbladder cancer သည်းခြေအိတ်ကင်ဆာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/gallbladder-cancer.html
4. Gallstones သည်းခြေကျောက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/gallstones.html
မ ပါရှင့်။ ၂၆နှစ်ပါ။ အမှားပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်ရှင့်
အရင်ကလည်းမေးတယ်။ ရောဂါဆိုတာ ဆုံပြီးဖြစ်တတ်လို့ သတိထားကြစေချင်တယ်။
ဆရာရှင့် သည်းခြေအိတ်ရောင်ရင် ဘယ်လို sign တွေပြပြီး ဘာတွေ သတိထားသင့်ပါသလဲရှင့်။
သည်းခြေအိတ်ရောင်ခြင်းဟာ သည်းခြေကျောက်ရှိနေရင်၊ ခေါ်အသားပိုဖြစ်နေရင်၊ သည်းခြေရည်လမ်းပိတ်နေရင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ သည်းခြေအိတ်ထဲမှာ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဖြစ်တဲ့ တစ်ရှူးခေါ် အပိုင်းအစနေရာသုံးမရဖြစ်ခြင်းနဲ့ အဲဒီနေရာစုတ်ပြဲခြင်းတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
Acute Cholecystitis ရုတ်တရက် ရက်တိုရောင်ခြင်း လက္ခဏာများ
• ရုတ်တရက် ဗိုက် ညာဖက် အပေါ်ပိုင်းနေရာ အလွန်နာခြင်း၊
• အဆီများတဲ့အစားအသောက်စားအပြီမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။
• အစာစာပြီးတိုင်း ပြန်နာခြင်း၊
• ဗိုက်မှာနာတဲ့နေရာကိုထိရင် ဖိရင် ပိုနာခြင်း၊ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရင် ပိုနာမယ်။
• ကိုယ်ပူခြင်း၊ ချမ်းနိုင်တယ်။
• ဂျွန်းဒစ် ခေါ် အသားဝါခြင်း၊
Abdominal ultrasound ဗိုက်ကို အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်မယ်။
Computed tomography scan (CT scan) စကန်လုပ်မယ်။
Hepatobiliary scintigraphy လုပ်လို့ရတဲ့နေရာ စစ်ဆေးမယ်။
Cholangiography ဆေးထိုးပြီး စစ်ဆေးမယ်။
ရုတ်ရက်ရောင်ရင် ဆေးရုံတင်ကုသရတယ်။ တချို့ Cholecystectomy ခွဲစိတ်ရတယ်။ အစားအသောက်ရှောင်ခိုင်းမယ်။ ပါးစပ်ကနေမစားမသောက်ရလို့ ဆေးသွင်းပေးမယ်။ ပိုးသေဆေးတွေပေးမယ်။ အနာသက်သာဆေးတွေပေးမယ်။
မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်က ကောသလမင်းကြီးမြင်မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်သည်။ ထိုအိပ်မက်ကို မိဖုရားကြီးအား ပြောပြရာ မိဖုရားကြီး၏တိုက်တွန်းချက်အရ ကောသလမင်းသည် မြတ်စွာဘုရားထံ အိပ်မက်အကြောင်း သွားရောက်လျှောက်ထားလေသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် အနာဂတံဉာဏ်တော်ဖြင့် ဆင်ခြင်၍ နောင်အနာဂတ်တွင် ဖြစ်ပျက်မည့် အကျိုးအပြစ်တို့ကို အစဉ်အတိုင်း ဟောကြား နှစ်သိမ့်တော်မူခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀ဝ ကျော်လာသော ယခုခေတ်တွင် ဘုရားဟောပြချက်ဖြစ်သည့် ကောသလအိပ်မက်တို့သည် အမှန်စင်စစ် ကိုက်ညီလျက် တွေ့ကြုံနေကြရပါသည်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁)
အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးကောင်သော နွားလား ဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်သည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ ကောက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်ဆီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ ရှားပါးငတ်မွတ်ခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
နွားနက် လေးခု ဝှေ့မူဟန်ပြင်၊ မဝှေ့ကြဘဲ ရှောင်လွဲသည်မြင်၊
အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် မိုးဆင်၊ ခြိမ်းသံပေး မိုးဝေးလွင့် ပျောက်စင်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၂)
နုနယ်သေးငယ်စွာသော အပင်တို့သည် ပွင့်ကြ၊ သီးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ဆုတ်ယုတ်သောကာလ လူတို့ အသက်တန်း တိုသော ကာလ၌ ယောကျာ်း မိန်းမတို့သည် ထက်သန် ပြင်းသောရာဂ ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ငယ်ရွယ်စဉ် အခါ၌ပင် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သားမွေးခြင်း တို့ကို ပြုကုန်လတ္တံ့။
မြေက မကြွ ငယ်လှသစ်ပင်၊ ဖူးငုံရင့်ပြီး ပွင့်သီးတွေမြိုင်၊
အရွယ်မမျှ ပျိုမ မယ်ခင်၊ သမီးသား လင်သား အိမ်ထောင်ချင်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၃)
နွားမကြီးတို့သည် မိမိတို့ မွေးစဖြစ်သော နွားမငယ်တို့၏ နို့ကို စို့သည်။
နောင်အခါ ကြီးသောသူတို့အား အရိုအသေပြုခြင်း ပျောက်ကွယ်သော ကာလ၌ အမိအဖ၊ ယောက္ခမ စသူတို့သည် ကိုးကွယ်ရာ မရှိကုန်သည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့၏ သားသမီး သားမက် ချွေးမ စသူတို့ထံ၌ ကပ်ရပ်၍ ငြိုငြင် ညှိုးငယ်စွာ အသက်မွေးရကုန်လတ္တံ့။
ယနေ့ဖွားစ နွားမနို့သာ၊ မိခင်နွားကြီး စို့ပြီး နေရှာ၊
သမီးနှင့် သား စီးပွားပိုင်ရှာ၊ မိနှင့်ဘ ကျွေးမှ စားရမှာ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၄)
လှည်းတို့၌ ဝန်ကို ဆောင်နိုင်သော နွားကြီးတို့ကို မကမူ၍ နွားငယ်တို့ကိုသာ ကစေကုန်၏။ နွားငယ်တို့လည်း ဝန်ကို မနိုင်၍ လှည်းတို့ကိုလည်း ဆွဲခြင်းငှာ မတတ်နိုင်သည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အသက်ကြီး ဝါကြီး ပညာရှိကုန်သော သူတို့အား အမတ်၊ တရားသူကြီး စသော ရာထူးစည်းစိမ်တို့၌ မခန့်ထားမူ၍ အသက်၊ ဝါ၊ ပညာ ငယ်ကုန်သော လူငယ်တို့အားသာ ခန့်ထားကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အခွင့်အရေးမသိ၊ မတော် မမှန်ဖြစ်၍ အမှု မပြီး၊ အကျိုးမပြီး ရှိသောအခါ လူငယ်တို့သည် မိမိတို့၏ ရာထူးစည်းစိမ်ကို စွန့်ကြလတ္တံ့။ လူကြီးတို့သည်လည်း ငါတို့မှာ ပြင်ပကသာ ဖြစ်၏ဟု လျစ်လျှူပြု၍ နေကြလကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ တရားမစောင့် အမှုမပြီးကြသည်နှင့် မင်းနှင့်တကွ တိုင်းပြည်ပါ ဆုတ်ယုတ် ပျက်ဆီးကြလတ္တံ့။
နွားကြီးမကြိုက် ဝင်တိုက်နွားငယ်၊ မရုန်းနိုင်ဘဲ ဝပ်လဲနေတယ်၊
ကြီးသူဖယ်ရှား မြှောက်စားလူငယ်၊ တိုင်းပြည်ရေး ရှုပ်ထွေး ပွေတော့မယ်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၅)
ခံတွင်းနှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားသည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည် နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့။
ခံတွင်းနှစ်ခွ များလှ ရာဇာ၊ ကျွေးကျွေးသမျှ မဝနိုင်ပါ၊
မှူးမတ်မင်းစိုး လာဘ်ထိုးသူရှာ၊ နှစ်ဖက်စား တရားစီရင်မှာ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၆)
အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော ရွှေခွက်ကို မြေခွေးဖိုအား ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ပေး၏။ မြေခွေးလည်း ထိုရွှေခွက်၌ ကျင်ငယ်စွန့်သည်။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးမြတ်သော သူတို့သည် အချီးအမြှောက် မခံရ၊ ဆင်းရဲကြ၍ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးတရ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြလတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်တို့ အသက် မွေးခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမျိုးယုတ်တို့အား ပေး၍ အသက်မွေး ကြကုန်လတ္တံ့။
ခွေးအိုထံဆက် ရွှေခွက်သိန်းတန်၊ ကျင်ငယ်အမြဲ ခွက်ထဲ စွန့်ပြန်၊
မျိုးမြတ်သမီး ပစ္စည်းမက်ဟန်၊ အမျိုးယုတ် လင်လုပ် ပေါင်းဖက်ဆံ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၇)
တယောက်သော ယောက်ျားသည် အင်းပျဉ်၌ ထိုင်လျက် လွန်ကို ကျစ်၍ ခြေရင်း၌ ထား၏။ ထိုအင်းပျဉ်အောက်၌ရှိသော ဆာလောင်သော မြေခွေးမသည် ထိုယောကျာ်း မသိစဉ်လျှင် ထိုလွန်ကို စား၏။
နောင်အခါ မိန်းမတို့သည် အစားအသောက်၊ အဝတ်၊ အနေအထိုင် စသည်တို့၌ လော်လည်ခြင်းရှိ၍ မိမိတို့ လင်ယောက်ျားသည် ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ရှာဖွေစုဆောင်းအပ်သော ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အစားအသောက်တို့၌ လည်းကောင်း၊ သောက်စား ကစားခြင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အပျော်အပါးတို့၌ လည်းကောင်း၊ သဘောက် လင်ငယ်ထားခြင်းတို့၌လည်းကောင်း အရမ်းမဲ့လျှင် ဖြုန်းတီးလေလတ္တံ့။ ခွေးမသည် မသိစဉ်းစားသကဲ့သို့ အိမ်သူ မိန်းမတို့သည် ဤသို့ တိတ်တဆိတ် ဖြုန်းတီး ခိုးစားကြလတ္တံ့။
ရှေ့ကကျစ်ချ လွန်စကြိုးကို၊ ခွေးမ ခိုးစား ကိုက်ဝါးကာ မျို၊
လင်ကြီးပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမသို၊ လင်ငယ်အား မယားလောကွတ်ပို။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၈)
ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။ လူတို့သည် အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီး အတွင်းသို့သာလျှင် လောင်းထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အဖန် တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသော အခြံအရံ အိုးတို့ အတွင်းသို့ကား မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲ နေသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ မကောင်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မင်းနှင့်တကွ လူတို့ တရားပျက်ကွက်၊ ဩဇာညံ့ဖျင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ မင်းအစိုးရတို့သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မင်း၏ အကျိုးစီးပွား အတွက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်စေအံ။ ဆောင်ရွက် စေအံ။ ထမ်းရွက်စေအံ။ သို့ဖြစ်ရကား မင်းတို့၌သာ ပြည့်စုံ အကျိုးခံစားကြရ၍ ဆင်းရဲသားတို့မှာ ရေမရှိသော အိုးတို့ပမာ တစုံတရာ မရှိ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်လတ္တံ့။
အိုးငယ်ချည်းနှီး အိုးကြီးရေလျှံ၊ အိုးကြီးကိုပဲ ရေဆွဲလောင်းပြန်၊
ဆင်းရဲသူများ ဝတ်စားမကျန်၊ အခွန်တွက် နှိပ်စက် ငွေတောင်းခံ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၉)
နက်ရှိုင်း ကျယ်ဝန်းသော ရေကန်ကြီးတခုတွင် သတ္တဝါတို့ ဆင်း၍ ရေသောက်ကြ၏။ ကန်၏ အလယ် ရေနက်ရာ၌ ရေသည် နောက်၍ ကန်နားဝန်းကျင် ရေတိမ်ရာ သတ္တဝါတို့ နင်းရာ၌ ရေသည် ကြည်လင်၏။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့သည် မတရား အုပ်စိုးခြင်း၊ တံစိုးစားခြင်း၊ လော်လည်ခြင်း၊ သနားညှာတာ ကရုဏာ မဲ့ခြင်း၊ ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်ခြင်းတို့ ရှိလျှက် လူတို့အပေါ်၌ အထူးထူး အပြားပြားသော အချင်းအရာဖြင့် အခွန်အတုတ်တို့ကို ခွဲခန့် ကောက်ယူလတ္တံ့။ ထိုအခါ လူတို့မှာ တစုံတရာ မပေးဆောင်နိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲလျက် မြို့ကြီးရပ်ကြီးတို့၌ မနေနိုင်ပဲ ရပ်စွန် ပြည်နားသို့ သွားရောက်နေကြရသည် ဖြစ်လတ္တံ့။ ကန်အလယ်တွင်နောက်၍ ကန်ဘေးတွင် ကြည်သကဲ့သို့ မြို့လယ်ရွာလယ်၌ တိတ်ဆိတ်၍ ရပ်စွန်ပြည်နား၌ လူစည်ကားလတ္တံ့။
ကြာမျိုးငါးဝ ပွင့်ကြရေကန်၊ ရေလယ်နောက်လျက် ကမ်းဘက်ကြည်ပြန်၊
မြို့တွင်းပွေရှုပ် ခွန်တုတ်ကောက်ခံ၊ မြို့ပြင်ထွက် ပြည့်နှက်စည်ကားရန်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၀)
တလုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည် အချို့ ပျော့၏၊ အချို့ မနပ်၊ အချို့ နပ်၏။။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မိုးကွက်ကြား ရွာလတ္တံ့။ ထိုအခါ အချို့နေရာ၌ မိုးရွာလွန်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ၌ မရွာ၍ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ တွင်ကား မိုးမှန်၍ ကောင်းအံ။ ဤသို့လျှင် ထမင်းအိုးတွင် မြင်သော ထမင်းကဲ့သို့ ကောက်ပဲသီးနှံ သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။
တအိုးတည်းချက် အကျက်မညီ၊ ထမင်းမာဆတ် ပျော့နပ် သုံးလီ၊
မင်းကျင့်လူများ တရားမမှီ၊ မိုးသုံးစား ကွက်ကြားရွာချမည်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၁)
အဖိုးတသိန်းတန်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်သော ကာလတွင် လော်လည်၍ လာဘ်လာဘကို မက်မော ကုန်သော ရဟန်းအလဇ္ဇီ လူအလဇ္ဇီတို့သည် ဆွမ်း၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ သင်္ကန်း၊ ဥစ္စာပစ္စည်း စသည်တို့ကို အလိုရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ လမ်းခရီးဆုံ၊ အိမ်ဝ၊ အိမ်ကြို အိမ်ကြားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားတော်ကို ဟောကြားလတ္တံ့။ နိဗ္ဗာန်အလို့ငှာ ဟောတော် မူအပ်သော အလွန် မွန်မြတ်သော တရားတော်ကို တပဲ၊ တမူး၊ တကျပ် စသည်တို့ အကျိုးငှာ ရောင်းစား ဟောပြော ကြသည် ဖြစ်၍ တသိန်းထိုက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
မွှေးပျံ့နံကြူး စန္နကူးသိန်းတန်၊ ပုန်းရည်နှင့်လဲ သုံးစွဲခါပြန်၊
အလဇ္ဇီများ တရားဖိုးတန်၊ ငွေနှင့် ပုလဲ အမြဲဟောမည်မှန်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၂)
ဘူးတောင်းတို့သည် ရေ၌ နစ်သည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ကိုသာ ရာထူး စည်းစိမ် ပေးသည် ဖြစ်၍ အမျိုးယုတ်တို့ တန်ခိုးအာဏာ ကြီးမားထင်ပေါ် အရာရာတွင် တွင်ကျယ်လျက် ၎င်းတို့ စကားသာလျှင် ဘူးတောင်း နစ်သကဲသို့ နစ်၍ တည်ကုန်လတ္တံ့။
သံကြေးမပေါင်း ဘူးပေါင်းဘူးအုံ၊ ရေတွင်စုပ်စုပ် နစ်မြုပ်လုံးစုံ၊
ပညာရှိများ စကားဥဿုံ၊ ပြောသမျှ လောက မသုံးကုန်။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၃)
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ တော်မှန် လိမ္မာ ပညာရှိသော သူတို့၏ စကားသည် မည်သည့် အရာ၌မဆို လေးသော ကျောက်ဖျာ ရေတွင် ပေါ်သကဲ့သို့ နစ်တည် ခြင်းမရှိ၊ မခိုင်မမြဲ ရှိကြကုန် လတ္တံ့။
အိမ်လုံး တောင်လုံး ကျောက်တုံးကျောက်ဖျာ၊ ရေမှဘွားဘွား ထင်ရှားပေါ်လာ၊
ရဟန်းရှင်ဆိုး လူဆိုးများသာ၊ ဂုဏ်ရောင်တိုး တန်ခိုးပေါ်ထွက်သာ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၄)
ဖားငယ်မတို့သည် ကြီးစွာသော မြွေဟောက်ကြီးများကို စားမြိုသည်။
နောင်အခါ လူတို့သည် ပြင်းသောရာဂ ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိလေသာအလိုသို့ လိုက်လျက် ငယ်ရွယ်ကုန်သော မယားတို့၏ အလိုသို့ လုံးဝလိုက်ကြကုန်လတ္တံ့။ အလုပ်အကိုင်မှု၊ ဥစ္စာပစ္စည်းမှု၊ ကျေးကျွန်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စသော အရပ်ရပ်တို့၌ လင်ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးခြင်းကို ပြုကြမည်ဖြစ်ရကား ဖားငယ်မသည် အဆိပ်လျင်သော မြွေကို စားမျိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
အဆိပ်ပြင်းတောက် မြွဟောက်ကြီးကို၊ ဖားငယ်မက ကိုက်ဝါးကာမျို၊
ကညာယူထား သက်ကြားဖိုးအို၊ မယားဆဲ အမြဲအော်ငေါက်ဆို။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၅)
မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ အဆင်း ဆိုးဝါးသော ကျီးတို့ကို ရွှေ၏အဆင်းနှင့်တူသော ရွှေဟင်္သာတို့က ခြံရံနေကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ အားနည်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ ထိုမင်းတို့သည် ဆင်စီး မြင်းစီး စသော အတတ်တို့၌ မလိမ္မာ၍ စစ်ထိုးခြင်း၌ မရဲရင့်ဘဲ ဖြစ်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ တိုင်းပြည် နိုင်ငံ ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုး၍ တူသော ဇာတ်ရှိသော သူကောင်းသားတို့အား အစိုးရခြင်းကို မပေးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစားကြကုန်သော အမျိုးယုတ်သော ကျေးကျွန်တို့အားသာ ပေးကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကောင်းသားတို့ ကိုးကွယ်ရာ မရှိပဲ အစိုးရခြင်း၌ တည်ကုန်သော အမျိုးယုတ်တို့ထံ၌ ခစားကြကုန် လတ္တံ့။
အဆင်းမည်းနက် ကျီးငှက်ထံမှာ၊ ရွှေဟင်္သာများ ခစားနေပါ၊
ပညာသီလ ပြည့်ဝသူဟာ၊ သူယုတ်အား ဝပ်တွားနေရမှာ။
ကောသလမင်း အိပ်မက် (၁၆)
ဆိတ်တို့သည် ကျားသစ်ကို သတ်စားကြသဖြင့် ကျားသစ်တို့သည် ကြောက်လန့်လျက် ဆိတ်တို့ကို အဝေးမှ မြင်လျှင်ပင် တောချုံရှိရာသို့ ပြေးကြသည်ကို မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးရ ကုန်သည် ဖြစ်၍ အမျိုးမြတ်သူတို့ မထင်ရှား ဖြစ်လတ္တံ့။ အမျိုးယုတ် သူတို့မှာ မင်းကျွမ်းဝင်သည် ဖြစ်၍ တရားရုံးတို့၌ ဩဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးလျက် အမျိုးမြတ်သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင် လယ်မြေ ဥစ္စာ အရပ်ရပ်တို့ကို ငါတို့ လယ်မြေဥစ္စာ ဖြစ်သည်ဟု သိမ်းယူကြ၍ တရားတဘောင် ဖြစ်လျှင် တန်ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပ်ပုတ်ခတ် ခြိမ်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက် အနိုင်ကျင့် ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်သူတို့ ကြောက်လန့် စက်ဆုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ လယ်ယာ ဥစ္စာတို့ကို ပေးအပ်ကုန်လျက် အိမ်သို့ပြန်၍ အိပ်နေကြကုန်အံ။ ထိုမှတပါးလည်း အကျင့်သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သီလမဲ့သော ရဟန်းတို့က ချုပ်ချယ် ဖိနှိပ်ကြလေသဖြင့် တောသို့ ပြေးဝင် ပုန်းအောင်း ကြကုန်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် အမျိုးကောင်း၊ သူတော်ကောင်း တို့လည်း လွတ်ရာကျွတ်ရာ တောတောတောင်တောင် တို့ကို ပြေးပုန်း ကြကုန်လတ္တံ့။
ဆိတ်ကိုမြင်ငြား ကြောက်အား ပြင်းထန်၊ ခြင်္သေ့၊ သစ်၊ ကျား ခုန်လွှား ပြေးပြန်၊
သူယုတ်မာများ ထောင်လွှားနိုင်ငံ၊ သူတော်ကောင်း ပုန်းအောင်း တောမြိုင်ယံ။
အိပ်မက် (၆) ပန်းချီကားမှာ အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော ရွှေခွက်ကို
အိပ်မက် (၇) ပန်းချီကားမှာ တယောက်သော ယောက်ျားသည်
အိပ်မက် (၈) ပန်းချီကားမှာ ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။
အိပ်မက် (၁၀) စာမှာ တလုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည်
အိပ်မက် (၁၁) ပန်းချီကားမှာ အဖိုးတသိန်းတန်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို
တရားမစောင့်သောမင်းတို့၏လက်ထက်၌ ကျောင်းသားသူငယ် ရဟန်းရှင်လူတို့ကိုသာမက သတ်ပုံကိုပါ နှိပ်စက်ကြကုန်လတ္တံ့။
China reports 14% surge in new cases တရုပ်ပြည်မှာ HIV ကူးစက်မှုများလာ
၂၉-၉-၂ဝ၁၈ နေ့ သတင်းဖြစ်တယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ HIV ဖြစ်နှုန်း ၁၄% တက်လာတယ်။
ကူးစက်ခံထားရသူ စုစုပေါင်း ၈ သိန်း ၂ သောင်းရှိတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်း လူနာသစ် ၄ သောင်းတိုးလာတယ်။
အများအားဖြင့် လိင်မှုကနေကူးစက်တာဖြစ်တယ်။ အရင်ကတော့ သွေးကနေကူးတာများတယ်။ အခု သွေးကနေကူးစက်တာ သုညသာရှိတော့တယ်။ လိင်တူကနေကူးတာလည်း များတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ကျဆင်း နည်းပါး ပပျောက်ပါစေသတည်း။
ရွေးကောက်ပွဲတွေနီးလာရင် အပြိုင်အဆိုင် ကိုယ့်ပါတီအနိုင်ရရှိရေးအတွက် ပြောကြ ဟောကြ ရေးကြတယ်။ ကျွန်တော်ပါခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ လို ဟိုးအရင်ကဟာတွေ ထားလိုက်ပါမယ်။ ၂ဝ၁၂ တုန်းကတခါ၊ ၂ဝ၁၅ မှာတခါနဲ့ အခုတခါ။
ကွာခြားတဲ့အချက်တခု သတိပြုမိလာတယ်။ အင်နယ်လ်ဒီက ပါတီထောင်ကတည်းက ခေါင်းဆောင်တွေပုံ ပြန်တင်ကြတယ်။ ဦးကြည်မောင်တို့ ဦးဝင်းတင်တို့ စသဖြင့်ပါတယ်။
တဖက်ပါတီက ဗခမကသန်းရွှေပုံ မတင်ပါ။ သမတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ပုံလည်း မတင်ပါ။
IUD ကောပါးတီ မေးခွန်း
မင်္ဂလာပါဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၂ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးက ၁နှစ် ၁လရှိပါပြီ။ 14-2-2018 တွင် IUCD copper ထည့်ခဲ့ပါသည်။ ၁ လပြည့်ပြီးနောက် ဆရာဝန်နှင့် ပြန်ပြသခဲ့သည်။ တနှစ်ပြည့်မှပြန်လာဟု ဆရာဝန်မှတ်ချက် ရေးပေးလိုက်သည်။ တလတခါ ရာသီပုံမှန်လာသည်။ ၇လပိုင်းမှစ၍ ရာသီလာတာ မမှန်တော့ပါ။ ၂ပတ်ပြည့်တာနဲ့ ရာသီပြန်လာပါသည်။ ကြာချိန် ၅ ရက်ခန့်ရှိပါသည်။ ဆရာဝန်အားပြန်ပြရာ USG ရိုက်ကြည့်ရာ IUCD အနည်းငယ် ရွေ့နေသည်ဟုပြောပါသည်။ Ranferon-12 တနေ့တကြိမ် Menoral တနေ့ ၃ကြိမ် ၂ ပတ်တိတိ သောက်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။ တပတ်မပြည့်ခင် ရာသီပြန်လာ၍ သွားပြန်ပြရာ ထိုဆေးများအား ၂ပတ်တိတိ ထပ်သောက်ခိုင်းပါသည်။ စိုးရိမ်စရာ မလိုဟုပြောပါသည်။ သို့ပေမယ့် စိုးရိမ်မိပါသည်။ ကျွန်မမှာ ကျောင်းဆရာမတဦးဖြစ်ပြီး မြို့ထဲမှ မြို့စွန်ဘက်သို့နေ့တိုင်း ကျောင်းတတ်နေရပါသည်။ အသွားအပြန် ကားပေါ်မှာတင် အချိန် ၄ နာရီနီးပါး ကြာပါသည်။ လမ်းလည်း အလွန်ုကြမ်းပါသည်။
Respiratory rate အသက်ရှူနှုန်း
မင်္ဂလာပါဆရာ ယောက်ျားလေး ၂ လသားပါ အသက်ရှူမြန်တယ်လို့ ထင်လို့ပါ ချောင်း တခါတလေ ဆိုးပါတယ် ထိုင်ပြီး နို့တိုက်ရင် သီးတတ်ပါတယ် နို့သောက်နိုင်ပါတယ် မမှိန်းပါဘူး ပြာလဲမပြာပါ ငိုရင် မျက်နှာတော့ရဲလာပါတယ် ချွေးထွက်ပါတယ် အမြဲတော့ မဟုတ်ဘူး ဆီးဝမ်းမှန်ပါတယ် အသက်ရှူမြန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ သိချင်ပါတယ် စိုးရိမ်ရလားဆရာ ဘယ်လိုအချက်တွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါသလဲ
အသက်ရှူနှုန်းဟာ အသက်အရ မတူပါ။ လူကြီးတွေက တမိနစ်မှာ ၁၂ ကြိမ်ကနေ ၂ဝ ကြိမ်ရှူတယ်။
မွေးစကနေ ၁၂ လသားအထိ အကြိမ် ၃ဝ ကနေ ၆ဝ။
အသက် ၁ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အထိ အကြိမ် ၂၄ ကနေ ၄ဝ။
အသက် ၄ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်အထိ အကြိမ် ၂၂ ကနေ ၃၄။
အသက် ၆ နှစ်ကနေ ၁၂ နှစ်အထိ အကြိမ် ၁၈ ကနေ ၃ဝ။
အသက် ၁၃ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်အထိ အကြိမ် ၁၂ ကနေ ၁၆။
ကျောက်ပျဉ်များသည် အရွယ်အစားစားရှိစေကာမူ ပုံသဏ္ဌာန်မှာ တမျိုးတည်းဖြစ်၏။
ကျောက်ပျဉ်ဖြင့် သနပ်ခါးအမွှေးနံ့သာသွေး၍ လိမ်းကျံသော အလေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေးကျသော ယဉ်ကျေးမှုတရပ် ဖြစ်ခဲ့၏။ သက္ကရာဇ် ၈၅၅ ခုနှစ်တွင်ရေးသည့် ဘူရိဒတ်ဇာတ်ပေါင်းခန်းပျို့၌ -
ဤစာသာရ၊ ဂေါသီတကို၊ နားဝနှစ်ဖက်၊ မြကျောက်ထက်၌၊ ဥာဏ်လက်ကိုထေး၊ ဖြည်းဖြည်းသွေး၍၊ နံ့မွှေးတသုန်၊ လိမ်းလင့်ကုန် စသည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။
(၁၂-၇-၁၉၇၅ နေ့ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ်မှ)
ပုံသဏ္ဌာန်မှာ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်၏ မဟုတ်ပါ။ နံ့မွှေးတစ်သုန်၊ လိမ်းလင့်ကုန် မဟုတ်ပါ။
ကျောက်ပျဉ်ကို ရေပတ်လည်ဆောင် အလယ်ခေါင် သောင်ထွန်း မိန်းမလှကျွန်းလို့ စကားထာဝှက်ကြတယ်။ ပဉ္စမတန်း မြန်မာဖတ်စာထဲမှာ ရေလယ်ကောင် သောင်ထွန်း။ နတ်သမီးနေတဲ့ကျွန်းလို့ ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ နတ်သမီးနဲ့ မိန်းမလှကတော့ အကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ရေလယ်ခေါင်နဲ့ ရေလယ်ကောင် သတ်ပုံမတူပါ။
ကျွန်တော်က ပညာတွင်းကတော့ နက်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးကို အတော်သဘောကျတယ်။ ဆရာဝန်ဘဝကိုရေးစဉ်က တခါသုံးတယ်။ ရှေးတုန်းက ကာကွယ်ဆေးတွေစာမှာ ထပ်သုံးတယ်။ အခုတခါသုံးရဦးမလို ဖြစ်လာတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ၇ ရက်ကြာသုံးမရဖြစ်သွားလို့ အရာရာလက်ဝင်နေတယ်။ အများဆုံးမေးလေ့ရှိတဲ့နေရာကနေ မေးတာတွေကို ဖတ်သာဖတ်ရပြီး ပြန်ဖြေမရပါ။ တချို့မေးခွန်းတွေက အရေးကြီးပြီး အလောသုံးဆယ်ပြန်သင့်တာတွေ။ အဲတော့ စာပြန်မရတဲ့နေရာကို ဖွင့်၊ မက်ဆေးတွေ ဖတ်၊ ကူးယူပြီး သုံးရတဲ့အကောင့်ကနေ ပို့စ်အဖြစ်တင်တယ်။ မေးတဲ့သူ တွေက ဖတ်ရ မရတော့ မသိပါ။ ဆောရီး။
အဲတာနဲ့မရတာရှိသေးတယ်။ မေးတဲ့သူကို ဖွင့်ရတဲ့နေရာကနေ လိုက်ရှာပြီး အဖြေပို့ပေးရတယ်။ အကောင့်သစ်မှာ ဖရင်းရီကွက်စ်လုပ်ပြီ ဖြေရတယ်။
အဲတာနဲ့မပြီးသေးတာရှိသေးတယ်။ ယူအက်စ်ကနေမေးတဲ့တယောက်ရဲ့ဖုန်းနံပတ်လိုက်ရှာရတယ်။ သူ့ခင်ပွန်း ဖုန်းနံပတ်ရတော့ ဇနီးကိုပြောပေးပါ မက်ဆေ့ချဖွင့်ဖတ်ပါလို့ ရေးရတယ်။ မေးခွန်းက သူ့ခင်ပွန်းအတွက်မေးတာ။ ဇနီးကသာ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ ဘာလုပ်လုပ် ခက်တာတွေချည်းသာ လုပ်ရတဲ့ ဝဋ်ပါနေတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်တော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ခက်တာနဲ့သာ ညားတယ်။ ကျင့်သား တော်တော်ကိုရနေပါပြီ။ စိတ်မပျက်ပါ။ ခက်တာကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ နည်းတွေရတာပေါ့။
Vaccines ရှေးတုန်းက ကာကွယ်ဆေးတွေ
ဆရာရေ မြန်မာပြည်မှာ ကျမတို့ကလေးဘဝက ဘာကာကွယ်ဆေးတွေထိုးခဲ့ရသလဲဆိုတာ ဖြေပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်လေးစာလျှက်
၆ ပါတ် (၁ လခွဲ) DPT (ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင်) ၁၆ ပါတ် (၁ လခွဲ) OPV ပိုလီယို ၂
မြန်မာပြည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅ဝ အရင်က ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့တာတွေက ကနေ့ထိုးပေးနေတာတွေနဲ့ မတူပါ။
အခုခေတ်မှာ မွေးတာနဲ့ထိုးပေးတဲ့ ဘီစီဂျီ ခေါ် တီဘီကာကွယ်ဆေး မထိုးသေးပါ။ ပိုလီယိုဆေးလည်း မတိုက်သေးပါ။ အသဲရောင်ဘီ မပေါ်သေးပါ။ ဒီပီတီ ခေါ် ဆုံဆို့-ကြက်ညှာ-မေးခိုင် ကာကွယ်ဆေးလည်း မပေါ်သေး။ ဦးနှောက်မြှေးရောင် ကာကွယ်ဆေးလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းကိုလည်း အေတီတီ ခေါ် တီတီ ခေါ် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး မထိုးသေးပါ။
အဲဒီကာလမှာ စမောလ်ပေါက်စ် ခေါ် ကျောက်ကြီးရောဂါက ကပ်ရောဂါဖြစ်နေသးလို့ ကျောက်ကြီးကာကွယ်ဆေး ထိုးကြရတယ်။ ကျောက်ထိုးဆရာဆိုပြီး ခန့်ထားပေးတယ်။ လူတိုင်းမှာ ကျောက်ဆေးအမာရွတ် တခု သို့မဟုတ် ၂ ခု လက်မောင်းမှာ ရှိကြတယ်။ ကျောက်ထိုးဆရာနဲ့ လက်လှမ်းမမီတဲ့ရွာတွေမှာ ကျောက်ပေါက်နာက အရည်ကို ရှားဆူးနဲ့ ထိုးနည်းလုပ်ကြရတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်စိရှေ့မှာ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
အခါအားလျှော်စွာ ပလိပ်ရောဂါလည်းဖြစ်လို့ ပလိပ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်။ ကပ်ရောဂါလိုဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာ ကာလဝမ်းရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်။ မှတ်မိသလောက် အဲလောက်သာရှိခဲ့တယ်။ ရှေးလူကြီးတွေက ခေတ်နောက်ကျကြတယ်။ ခေတ်မီဆေးဝါးတွေကို မသုံးနိုင်ကြပါ။ ရောဂါပိုးတွေကတော့ လူတွေထက်မြန်တယ်။ လူတွေထက် သာတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ရောဂါပိုးမွှားတွေနောက်ကနေ အမီလိုက်နေကြရတယ်။
ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ဆေးဝါးနည်းသလို ရောဂါလည်း နည်းပါးခဲ့တယ်။ ပညာတွင်းကတော့ နက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေကြည်ရေသန့်သာ သောက်သုံးခဲ့ကြရတယ်။
Fat and Thin ဝသူ ပိန်သူ အတူတူ
ပိန်ချင်သူနဲ့ ဝချင်သူနှစ်ယောက်ဆီက တပြိုင်တည်း မေးကြတယ်။ ဖြစ်ချင်တာ မတူကြပမဲ့ အသက် မပြောကြတာ၊ အိမ်ထောင်ရေးမပြောကြတာမှာ တူကြတယ်။
၁။ ဆရာ သမီးက အရမ်းပိန်လို့ ဝိတ်လေးတတ်ချင်လို့ပါ။ အရင်က ကိုးဆယ့်သုံးပေါင်ရှိပါတယ် နေမကောင်း ဖြစ်ပြီး တော်တော်ပိန်သွားပါတယ် ပိန်နေရတဲ့ကြားထဲထပ်ပိန်တော့ ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။့့
၂။ ဆရာရေ သမီးအသက်က ၃၅ထဲမှာပါ။ ရာသီမပေါ်တာလေးလရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်သည်ပါ။ သမီးပေါင်ချိန်က ၁၈၆၊ အရပ်က ၅ပေ။ ပိန်ချင်တယ်ဆရာရယ်။
3. Causes of sudden weight loss ကိုယ်အလေးချိန် မထင်မှတ်ဘဲ ဘာလို့ကျသလဲ
5. Cyproheptadine ဝချင်လို့ပေးတဲ့ဆေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/08/cyproheptadine.html
8. Perfect Beauty အဆီကျ အသားဖြူ သွေးသားသန့် အရွယ်တင် နုပျို https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/perfect-beauty.html
9. Slimming Products, Man and woman Sex products http://www.facebook.com/pages/Slimming-Products-Man-and-woman-Sex-products/163476080361622
10. Weight gain လှယုံမက ဝချင်သေးပါလျှင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-gain.html
11. Weight loss pills are dangerous ပိန်ဆေးတွေအန္တရာယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/weight-loss-pills-are-dangerous.html
12. Weight loss ပိန်ချင်သလား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-loss.html
13. Xenical ဇန်နီကယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/xenical.html
ရေးထားတာ ၈ နှစ်ရှိပြီ။
နက်ဖြန်အလှူနေ့၊ သားတွေကိုသင်္ကန်းဆီး၊ သမီးကိုနားသ၊ လာသမျှကို အဝကျွေးပြီး၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲကြီး ဝှဲချီးလုပ်မှာပါ။ အလှူဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့ တသက်တာမှာ တခါတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတယ်။ အရပ်ကူ၊ လူဝိုင်း၊ ဆွေမျိုးတိုင်းလာကြ။ မိတ်ဆွေရင်းခြာတွေလည်း နီးသောဝေးသောမဟူ အလှူလာကြတယ်။ မနက်ဖြန်အလှူရက် စည်ချက်မကျန်ဘူးပြောရမှာပေါ့။
ဆရာ ကိုယ် နဲ့ ကို အသုံးလဲ သေသေချာချာလေးသိချင်မိတယ်ရှင့်
ယခုဆယ်တန်းမြန်မာစာ ခက်ဆစ်အဖွင့်မှာရေးထားတာ နှီးတောင်းလန်းက အမှန်မဟုတ်လားဆရာခင်ဗျာ။
လက်ရေတပြင်တည်း နှီးဒေါင်းလန်းကြီးရယ်နဲ့ သိုင်းဖွဲ့ကာ ဝိုင်းဖွဲ့ကာ စားကြသည်မောင် မကြည်အောင် ခပ်ငယ်ငယ့့် တေးဆိုကြ မြူးပျော်ကြ ဟေ့သူငယ်ချင်းရေ ဒို့နယ်ပယ်တွင့့် မိုးသက်ကယ်ဆင့့် ရှစ်ခွင်ကမည်း အို့့ ရွာမလိုလိုနဲ့ပဲ့့ တစို့ပေါ်မှာ ကင်တယ်မောင်ရယ် ဆူးရင်းခပ်ပြီး မိုးမျှော်ငရုပ်သီးထောင်းနဲ့ ကိုဘိုကေရယ် ဒေါင်းလမ်းကြီးရဲ့အလယ် ညီညွတ်ရေးနဲ့ အသက်ရှည်ရှည် ခင်တယ်မောင်ရယ် လက်ရေတပြင်တည်း ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြတယ်။
နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်ရဲ့ ဒီသီချင်းကို စာသားမူကွဲတွေနဲ့ သီဆိုကြပါတယ်။ လက်ရေတပြင်တည်း၊ နှီးဒေါင်းလန်းတွေနဲ့၊ ဝိုင်းဖွဲ့ကာ စားကြသည်၊ မြမဒီခင် ခပ်ငယ်ငယ်၊့့
တေးရေး - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်
တေးဂီတ - စန္ဒရား - ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို နှင့် အဖွဲ့
ဗီဒီယိုဖိုင် ခရက်ဒစ် - ဦးခင်ဟော်
စံကိုက်သတ်ပုံအရ လက်ရည်တပြင်တည်းလို့ရေးရတယ်။ သီချင်း ကဗျာတွေမှာ အသံနဲ့ကာရန်ယူရေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လက်ရေတပြင်တည်းကို လက်ရည်တစ်ပြင်တည်းလို့ ရေးထားတဲ့လင့်တခုမှာ သတ်ပုံမှားနေတယ်။ သီချင်းကောင်းလျှက် သတ်ပုံဖျက်၏။
မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့ရေးသားကြကြောင်းကို ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေက သက်သေခံနေပါတယ်။
ဒါရိုက်တာမောင်တင်ဦးဟာ သင်္ကြန်မိုးအပြင် တခါကတဘဝ စတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး စမ်းစမ်းအေးက လေချိုတသွေးသွေးဇာတ်ကားထဲမှာ အပျော့ဆွဲသီချင်းဆိုတယ်။
လေချိုသွေး - ရှုမဝစမ်းစမ်းအေး https://www.youtube.com/watch?v=DrKX76YcDjQ
အဲဒီ မြန်မာစာကို မှန်အောင်သာရေးသားတဲ့ခေတ်မှာ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ဂန္တဝင်မြောက်တာတွေကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ခုတော့ လေချိုတစ်သွေးသွေးနဲ့ တစ်ခါကတစ်ဘဘဝတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ ပေါကားတွေရပ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ပေါမြန်မာစာလည်း ရပ်စေချင်တယ်။
လူးဝစ်ဗေးလ်မြို့သွားတော့ အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေ ဝယ်ပေးလိုက်ကြတယ်။ ကျေးဇူး။ တခုကအမေရိကန်သမတတွေ အားလုံးပုံတွေပါတဲ့ အလုံးကလေး။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာကော့့ ဘုရင်တွေဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တာရွေးပြီး ရုပ်ထုတွေလုပ်ကြတယ်။ အကြိုက်မတူကြပါ။ သမတတွေပုံကို သူတို့လက်ထက်မှာတော့ ရုံးတွေရဲ့နံရံမှာ မချိတ်မနေရ။ သက်တမ်းကုန်တဲ့နောက်မှာ တချို့သမတတွေပုံက နတ်အိုးကွဲနဲ့ တင်စားလို့တောင်မရ။ နာကြည်းရွံရှာမှုတွေကိုတော့ တသက်မှာမေ့မရကြပါ။
တခါတုန်းက မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာရေးသားခဲ့ပါသည်
တခါတုန်းက တောအုပ်တခုအတွင်းဝယ် ခိုအောင်း၍ ရွာများကိုလိုက်လံ ဓားပြတိုက်နေသော ဗိုလ်ဗလဆိုသူရှိ၏။
ဟော့့ တဖက်ကို ခြေကွေးပြီး ယိမ်းထိုးရှေ့တက်
တခါ့့ တဖက်ကို ခြေကွေးပြီး ယိမ်းထိုးနောက်ဆုတ်
တခုတော့ရှိတယ် တက်လာတဲ့ခြေကို ရန်သူက
တချို့ကတော့ ခြေလှမ်းပုံကို ရုတ်တရက် မသိသာအောင် ရှမ်းဘောင်းဘီ ဝတ်ထားကြတယ်
ညဘက်ရောက်လျှင် တနေရာ၌ စုဝေးကြပြီး
(၁၉-၇-၁၉၇၅ နေ့ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ်မှ)
တစ်ခါတုန်းက မဟုတ်။ တောအုပ်တစ်ခုအတွင်းဝယ် မဟုတ်။ တစ်နေ့သောအခါ မဟုတ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ မဟုတ်။ တစ်ဖက်ကို မဟုတ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် မဟုတ်။ တစ်ချို့ကတော့ မဟုတ်။ ရုတ်တစ်ရက် မဟုတ်။ နောက်တစ်နေ့တွင် မဟုတ်။ တစ်နေရာ၌ စုဝေးကြပြီး မဟုတ်။
သတ်ပုံမှန်နဲ့သာရေးခဲ့ပါကြောင်း သက်သေခံပစ္စည်းတွေ ပို့ပေးကြသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြန်မာစာကို အမှန်ပြန်ပြင်ရတာ တရားရေးစနစ်ထက် ခက်မယ်။
Hell Hound at Large ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေတယ်
ဒေါက်တာ ဒေါက်တာ့ဆီကို page တခုရဲ့ Link ပို့ပေးပါ့မယ် အရမ်းအကျိုးရှိတဲ့ page တခုပါ ဒေါက်တာနှစ်သက်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် လေးစားစွာဖြင့်
ကျေးဇူး။ လင့်ကိုဖွင့်ပါတယ်။ အစောဆုံးတွေတာတွေထဲက တခုကို ဖွင့်ဖတ်တယ်။
လူတွင် အကြောပေါင်းတစ်ထောင် ရှိသည်။ မြန်မာတို့၏ အသုံးအနှုန်းတွင် ဂွမ်းဆီထိ ပီတိသောမနဿ
ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ယင်းအကြောပေါင်း တစ်ထောင်လုံး စိမ့်သွားသည့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပါမည်။ ပုဂံရာဇဝင်တွင် အနော်ရထာမင်းစောသည် ရှင်အရဟံ၏ တရားထူး တရားမြတ်ကို ကြားနာရ၍ အကြိမ်တရာ စစ်သောဆီတွင် အဖန်တရာဖတ်သော ဝါဂွမ်းကို ချဘိသကဲ့သို့ ဩက္ကမ သဒ္ဓါဖြင့် မတုန်မလှုပ်သော ပီတိ၌တည်၏ ဟု ဆိုသည်။
မူရင်းစာထဲမှာ လူတွင် အကြောပေါင်းတထောင် ရှိသည်ဟုကြားဘူးပါသည်ဖြစ်ပြီး၊ တင်ပေးသူက တထောင်ကို တစ်ထောင်လုပ်ထားတယ်။ အဖန်တရာကိုတော့ တစ်ရာမလုပ်ပါ။
အဲလိုပဲ အွန်လိုင်းမှာ စာအုပ်တွေတင်ကြတယ် ကောင်းတယ်ပြောရမှာ တွန့်ဆုတ်မိတယ်။ မူရင်းစာအုပ်တွေရဲ့ သတ်ပုံကို တင်ပေးသူတွေက ပြင်ပေးထားကြတယ်။ မလုပ်ကောင်းတဲ့အရာလို့ ထင်ပါတယ်။
ညိုမြ (အိုးဝေ) က ငရဲခွေးကြီး လွတ်လာသည်လို့ ၁၉၃၅-၂၆ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှား ရေးခဲ့တယ်။ အခု မြန်မာစာ ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေတယ်။
ဒီအရပ်မှာတော့ ရာသီဥတု ပြောင်းချင်သလိုလိုဖြစ်လာပြီ။ မနေညက တနေရာကအပြန် မြူတွေကျနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ညအိပ်တော့ သိမ်းထားတဲ့စောင်အထူ ယူခြုံရတယ်။ အအေးဒဏ်မခံနိုင်တဲ့အပင်အိုးလေးတွေကိုလည်း အိမ်ထဲ သွင်းထားရတယ်။
ကနေ့မနက်လင်းတော့ နေသာတာနဲ့ အိမ်ပြင်ခဏလေးထွက်တယ်။ ပန်းပင်လေးတွေပေါ်မှာ ရေစက်လေးတွေတွေ့ရတယ်။ ပန်းစိုက်တဲ့သူကပြောပြတယ်။ ရှဉ့်ကလေးတွေက အစာတွေယူလာပြီး အပင်လေးတွေအနားကမြေကြီးထဲမှာ မျြုပ်ထားကြလို့ အပင်တွေမခံနိုင်တဲ့။ ဆောင်းရာသီနှင်းကျချိန်အတွက် အစာတွေကို ကြိုတင်စုဆောင်းထားကြတာ။
ဖွါး နှင့် ဘွား
ဆရာရှင့် ဖွား နဲ့ ဘွား ဆိုတဲ့စကားလုံး အသုံးနှုန်းလေးပြောပြပေးပါအုန်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဇိတ်ဖွါး (ဆိတ်ဖွါးလို့ ပြောနေကြတာများတယ်။)
ဖွါးဖွါး = ခဏခဏ
ဖွါးလျား (ဆံပင် ဖွါးလျားချထားသည်။ အွန်လိင်းသတ်ပုံကျမ်းမှာ ဖွားရရားလို့ရေးထားတယ်။ ပြင်သင့်တယ်။)
ဖာ ဖါ ဖွာ ဖွာ ဖား ဖါး နှစ်မျိုးလုံးရေးနိုင်တယ်။ အရင်က ဖတ်တဲ့သူတွေလွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် ဖါ ဖါး ဖွါးလို့ ရေးကြတာများတယ်။
ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ ဘုန်းဘုန်းနှစ်ပါးနဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ တိုင်းပြည်အရေး မေးကြ ပြောကြပါတယ်။
ကွန်မင့်တခု ဖတ်ရတယ်။ ဒီဆရာတွေကြောင့် သမိုင်းသိခဲ့ရပါတယ်ဆရာ လေးစားလျက်ပါရှင့်
အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့ကနေ လူးဝစ်ဗးလ်မြို့ကိုလာကြတော့ ဆရာအော်ပီကျယ်ကပြောတယ်။ သူ (မင်းကိုနိုင်) မှာ သမိုင်းရှိတယ်။ ကျွန်တော်က ပထဝီတဲ့။
လာကြိုသူတယောက်က ကိုတေဇာ။ ကားမောင်းတဲ့သူ အစော (ကရင်) နဲ့ ဧည့်မြှောင်ကျွန်တော်တို့က အာဘောနဲ့ ဝါယောတွေဖြစ်ရော။
ဘယ်မှ မသွားခင် ကြိုတင် ကြော်ငြာထားရတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်တော့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ မြန်မာ့အစားအစာ မီနူးတွေအကုန် ထမင်းဝိုင်းတွေမှာ တွေ့ရတယ်။
အခုည လူးဝစ်ဗေးလ်မှာ အိပ်တယ်။ ဝိုင်ဖိုင်ထည့်ပြီးပြီ။ အိပ်ခန်းထဲကို ရေနွေးအိုးရောက်လာတယ်။ ဗမာထန်းလျက်နဲ့ ထိုင်းထန်းလျက်လည်း ပါတယ်။
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဖွဲ့ လင်ကွန်းရဲ့ သစ်လုံးအိမ်လေးဆီသွားကြတယ်။ ကျွန်တော်က တခေါက်ရောက်ဖူးလို့ တခြားနေရာတွေသွားတယ်။ ကေအက်ဖ်စီတင်တီထွင်သူပြတိုက်ရောက်တယ်။
အရင်တခေါက်ရောက်စဉ်က အိမ်ရှင်တွေမပါဘဲ ကေအက်ဖ်စီဆိုင်တခုဝင်စားတာ မကောင်းလှပါ။
မိုဟာမက်အာလီက အိပ်မက်+ သန္နိဋ္ဌာန် + အမြော်အမြင်ကြောင့် အောင်မြင်မှုရတယ်တဲ့
လူးဝစ်ဗေးလ် ဆူဗီနဲလ် လက်ဆောင်
ဈေးရောင်သူက လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသူကို ယူအာဖါးသားလား မေးတယ်။
လက်ဆောင်ရသူက ဖေ့စ်ဘွတ် ဖရင်းပါလို့ဖြေလိုက်တယ်။
အမှတ်တရ လက်ဆောင် ဦးထုပ်ရတယ်။ ကျေးဇူး ကိုစော + နော်သူသူထွန်း
ဗမာလုပ်တဲ့ ဂျပန်စာ အမေရိကမှာ စားရတယ်။ ကျေးဇူး။
အင်ဒီယာနာနဲ့ ကင်တပ်ကီကြားက အိုဟိုအိုမြစ်
အာသီးရောင်ခွဲစိတ်ပြီး စထရွက် ပိုးဝင်လို့ဆုံးသွားရတဲ့ ကေအက်ဖ်စီ ခေါ် ကြက်ကြော်ကို စတင်ခဲ့သူရဲ့ မိသားစုဝင်တယောက်
Strep throat စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ပနယ်စလင် မပေါ်သေးပါ။
Yamuna River ရွှေငကြင်းတို့ ပိုက်တွင်းမှာ သူတို့ခုန...
China reports 14% surge in new cases တရုပ်ပြည်မှာ ...
Reap What You Sow ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင် ကိုယ်ရိတ်သိမ်း...
Never Share တသက်လုံး တခုမှ မပို့ပါရန်
ဗွေ နှင့် ဘွေ
Numbers ကိန်းဂဏန်းများကပြောတဲ့ သမိုင်း
Encouragement makesafault easy to correct ပြုပြင...
Side Effects ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ (၂)
Pregnancy and Antihistamines ကိုယ်ဝန်နှင့် အအေးမိ ...
On Behalf Of ကိုယ်စားမေးကြသူများ
Flu jab and Flu shot တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး
Pregnant Lady Doctor ဆရာဝန်ကလဲ ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုတော့
Abdomen တခုတည်းသော ဝမ်းဗိုက်
Fish Paste (2) ငပိဖုတ်ရပြန်ခြင်း
Loss in translation (2) ခက်ကုန်စေခဲ့ပါတယ်
ချီးမွမ်း ၇ ယောက် ကဲ့ရဲ့ ၇ ယောက်
Patient and Family လူနာရှင်ဆိုတာ
Flower Pots ပန်းအိုးထဲကပန်း
The Heir နောက်လူ
Banana Education သူငယ်စာ ငှက်ပျောက်သီး
Diarrhea in babies ကလေးငယ်တွေ ဘာကြောင့်ဝမ်းပျက်ရသလ...
True Value ငွေတန်ဘိုး နှင့် စာတန်ဘိုး
Shelf Life of Medication ဆေးပုလင်းဖွင့်ပြီးနောက် ဘ...
HIV Tests စမ်းသပ်နည်းများ
Pneumonitis နူမိုနိုက်တစ် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ
Army Water Bottle ရေဗူးပေါက်တာ မလိုချင်
Hepatitis B Vaccine Storage ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ထားသို...
BBS ဗမာ့အသံ နှင့် မြန်မာ့အသံ နောက်ခံ
Cough Links အသက်ရှူလမ်းမှာဖြစ်တာတွေ
I Do Not Harm ရန်လုပ်ခံရတယ် အောက်မေ့နေကြတယ်
Causes of Miscarriage ကိုယ်ဝန်ဘာ့ကြောင့်ပျက်သလဲ